Ampidino UC Browser ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (1.20 MB)
Ampidino UC Browser,
UC Browser, iray aminireo mpitety tranonkala malaza indrindra aminny finday, dia efa nahatratra ny solosaina ho fampiharana Windows 8 teo aloha, saingy taminity indray mitoraka ity, ny ekipa namoaka rindrambaiko tena birao dia manolotra «browser» izay handeha tsara aminny Windows 7 aminireo mpampiasa PC.
Ny browser, izay manamafy ny fanomezana traikefa mifanentana aminny kinova findainy; Izy io dia mahavita mamindra tsoratadidy izay anananny mpampiasa Android, iOS ary Windows Phone aminny findainy na ny takelaka mivantana aminny browser desktop. UC Browser, izay atolotra maimaim-poana toy ny aminny kinova finday, dia mpitety tranonkala izay efa nitombo nandritra ny taona maro ary manakaiky ny mpifaninana aminy, izay olona goavambe ao aminny tsena.
Azo atao ny mahita ny endri-javatra tadiavinny mpizaha maoderina miaraka aminny UC Browser. Ny mpitety tranonkala, izay ahitàna ny fiasa rehetra toy ny varavarankely fanamoriana, ny fanohanana plug-in ary ny mpitantana tsoratadidy dia nitondra ny traikefany ihany koa teo aminny sehatra finday taminny birao. Ny safidy fanaraha-maso manaitra indrindra aminity raharaha ity dia ny ahafahanao manome baiko hisintona ny hetsika aminny tsindrio havanana.
Azo atao ny mahita fa UC Browser, izay manana sehatrasa tena faranizay kanto sy mora takarina, dia mandray lesona avy aminny mpizaha toy ny Chrome, Firefox ary Opera. Ny navigateur, izay mametraka marika mitovy aminny bokotra Firefox malaza eo aminny ankavia ambony, dia manolotra menio safidy iray izay nahazatra anao taminny Opera raha tsindrio eto. Na izany aza, na dia hafa aza ny famolavolana ny kiheba, azo atao ny maka ny aingam-panahinny Google Chrome aminny sary.
Raha tsindrio ny kisary fanasan-damba eo aminny zoro ambony ambony, misy lisitra lohahevitra tolo-kevitra hiseho ao aminny takelaka vaovao. Tsy sarotra ny miady hevitra fa ny kalitaonireo lohahevitra efa voaomana, izay omena loko sy endriny izay hahaliana ny sokajin-taona rehetra, dia tena tsara, na dia vitsy aza ny karazany. Raha vantany vao apetrakao io dia azonao atao ny manafatra ny mari-tsoratry ny mpanamory hafa ao anatinny segondra, mba tsy hanahirana anao aminireo plug-in toa ny Adobe Flash. Afaka mijery horonan-tsary Facebook sy YouTube ianao raha vantany vao mampiasa UC Browser.
Misaotra ny mpitantana fisie marani-tsaina, izay ahafahanao mamerina ny fisintomana tapaka taty aoriana, azonao atao ny manohy ny asanao manomboka aminny fotoana tapaka ny fifandraisana. Ho anny traikefa fitetezana rano misimisy kokoa, raha tianao, ireo pejy izay tsidihinao matetika dia miaraka aminny fizotranny preload ho anao ary afaka hahatratra ilay pejy tadiavinao ianao aminny fotoana tsindrioo.
UC Browser, izay afaka mitantana ny safidinny fampitahana rahona tsy mila programa hafa, dia manamora ny famindrana ireo adiresy rohy arahinao aminny findainao mankany aminny birao anao ho tsoratadidy. Ny sisa ataonao aminizany dia ny manindry ny kisary eo ankavananny tsoratry ny tsoratadidy.
Raha reraka aminireo mpitsidika taloha ianao ary mitady mpitety tranonkala vaovao hafa, UC Browser dia safidy mendrika hanomezana fahafaham-po ny fahaliananao hahafantatra.
UC Browser Specs
Haben'ny rakitra: 1.20 MB
Fanavaozana farany: 03-07-2021
MyPaint dia tonian-dahatsoratra mandroso ho anny mpanao hosodoko nomerika. Ny tonian-dahatsoratra,...
PanoramaStudio dia mpamoaka sary izay mety mahasoa raha te-hamorona sary panorama vaovao ianao na...
Watermark Software dia programa watermark izay manampy ny mpampiasa hisoroka ny fangalarana sary...
Google Nik Collection dia programa maimaim-poana azonao ampiasaina rehefa te-hanova ny sarinao...
iPhotoDraw dia programa maimaimpoana sy mora ampiasaina izay ahafahanao manova sy miasa aminny sary...
SHU, апликацијата што им овозможува на корисниците да прават слики од екранот и да споделуваат...